Taliyihii Ciidanka Asluubta oo maxkamada ciidamadu ku xakuntay madaxaa haku furto | Somalisan.com Home
Taliyihii Ciidanka Asluubta oo maxkamada ciidamadu ku xakuntay madaxaa haku furto 12/9/2012 2:49:00 P
Cabdi Maxamad Ismaaciil ( Cabdi buur ) taliyihii hore ee ciidamada Asluubta Cabdi Maxamad Ismaaciil ( Cabdi buur ) kaasi oo maamulka soamliland hargeysa ku qabteen xili uu ku sii jeeday degmada boorame sida ay wararka qaarkood sheegayaan kadib markii lagu eedeeyay inuu galay qiyaano qaran uuna sii daayay rag ka tirsanaa Xoogaga Alshabaab. Xarunta Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Muqdisho waxaa lagu dhageystay dacwad loo haytsay taliyihii hore ee ciidamada Asluubta Cabdi Maxamad Ismaaciil ( Cabdi buur ) iyo dad kale sida agaasimihii garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo nin la isna la sheegay inuu alshabaab ka tirsan yahay .
Maxkamadu dhageysi kadib waxay xabsi daa’in ku riday Cabdi Maxamad Ismaaciil ( Cabdi buur ) taliyihii hore ee ciidamada Asluubta Cabdi Maxamad Ismaaciil ( Cabdi buur ) kaasi oo maamulka soamliland hargeysa ku qabteen xili uu ku sii jeeday degmada boorame sida ay wararka qaarkood sheegayaan kadib markii lagu eedeeyay inuu galay qiyaano qaran uuna sii daayay rag ka tirsanaa Xoogaga Alshabaab. Taliyaha xabsi daa’inka lagu xukumay waxaa kale oo maxkamada horteeda laga sheegay inuu qaar ka mid ah xoogaga alshabaab markii uu sii daayay uu haddana siiyay ID- card muujinaya inay asluubta ka tirsan yihiin iyo waliba darajo ciidanimo sidaa daraadeedna uu muteystay inuu waligiis xabsiga ku jiro. Sidoo kale maxakamadu waxay xabsi mudo 5 sano ah ku xukuntay agaasimihii garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida kadib markii isna lagu eedeeyay inuu taliyaha ku gacan siiyay danbiyada loo heysto. Guddoomiyaha maxakamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed Liibaan Cabdi Yarrow ayaa maxkamada horteeda kaga dhawaaqay go’aanku maxkamadu ka gaartay dadkii maanta la horgeeyay kadib wada tashi laga sameeyay sida la sheegay talaabada maxkamadu maanta qaaday.